Ugo isii nke Social Media Optimization | Martech Zone
Sunday, December 6, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ebe m rụsịrị ọrụ na ụlọ ọrụ ngwanrọ ịntanetị na afọ iri gara aga, echere m na ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị folks na-achọ ndụmọdụ m banyere mmepe na nkwalite nke nyiwe ha - ọkachasị gbasara mgbasa ozi mmekọrịta. Anọ m na-eche ọtụtụ ihe banyere ihe na-eme ka ngwa kachasị maka mgbasa ozi mmekọrịta.
Mmekọrịta - imirikiti ngwa na-amalite ma kwụsị site na usoro a. Naanị ha na-eji Twitter, Facebook, LinkedIn na ngwa ndị ọzọ dị ka ebe ịmanye ozi ha na netwọkụ ndị ahụ. Nke a bụ iferi kacha nta nke na-elekọta mmadụ media njikarịcha… anapụta ozi gị na netwọk gị, n'ebe ọ bụla ha na-emi odude. Ọ bụghị n'ezie leverage mgbasa ozi mgbasa ozi.
mmeghachi omume - Ọ bụrụ n ’ị na - amanye ozi gị gaa na soshal midia, kedu ka ngwa gị ma ọ bụ azụmaahịa gị si emeghachi omume na ozi ahụ? You na-edeghachi nzaghachi, na-aza mmeghachi omume? You na-agbanwe usoro gị n'ụzọ kwekọrọ na ya? Mkparịta ụka bụ naanị mkparịta ụka mgbe ha abụọ na-ege ntị ma na-agwa ibe ha okwu.
ụgwọ ọrụ - Gịnị bụ ụgwọ ọrụ maka ịzaghachi ma ọ bụ isonye? Ọ bụrụ n'ịchọrọ mmekọrịta mmekọrịta na-aga n'ihu iji mekọrịta mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị sonyere ga-akwụghachi ụgwọ. Nke a apụtaghị na ị ga-emefu ego - ọ nwere ike ịbụ na ị na-enye ozi achọrọ. O nwekwara ike ịbụ virtual akwụmụgwọ n'ụdị usoro usoro, aha, baajị, wdg. Ọ gwụla ma ụgwọ ọrụ gị na-emetụta ego ha na-enweta, ị ga-elerịrị nke a anya. M na-ele nnọọ ole na ole na-elekọta mmadụ media kachasị ngwa bilie wee daa ozugbo mgbe ụgwọ ọrụ ha na-agbajikwa ma ọ bụ static.
Analytics - Nke a bụ ohere a tụfuru… ọtụtụ ngwa na-abanye n'ime njikọta mmekọrịta mmekọrịta mana nleghara anya iji tụọ mmetụta nke nkwukọrịta a. Olu azụmahịa gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike iru site na ịdebe usoro mgbasa ozi nke mgbasa ozi dị oke - mana ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-atụle ya nke ọma ka ị nwee ike ikpebi ego ole ị ga-etinye na ya.
Icheta - ike ị ziga ozi na atụmanya na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ nwere ike melite mkpokọta nnabata na iji ngwa gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịdabere na ngwa gị site na isiokwu, ọdịdị ala, ọdịmma, omume, wdg, ị ga-enwe mmekọrịta miri emi karị na ndị na-ege gị ntị.
Ntụgharị - ndị ọrụ anaghị amasị ịba ụba n’etiti ngwa, yabụ mee ka onye ọrụ nweta ahụmịhe ha. Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị nọ na Facebook, gbalịa iweta ọtụtụ ahụmịhe onye ọrụ gị ebe ahụ nwere ezi uche. Ọ bụrụ na mkparịta ụka ahụ dị na saịtị gị mana malitere na Twitter, weghachite Twitter na saịtị gị. Nke a bụ isi ihe mere m ji daa na nso nso a IntenseDebate ma bulie Echo site na JS-Kit. JS-Kit na-eweta nkata n'ụzọ dị irè n'ọtụtụ ngwa mgbasa ozi mmekọrịta na-ejikọ ha ọnụ Martech Zones sistemụ ịza ajụjụ.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ ịgbasa ngwa gị ma ọ bụ atụmatụ gị na mgbasa ozi mmekọrịta, jide n'aka na ị ga-enwe usoro zuru ezu. Lastinggbasa ozi gị n'ofe ụyọkọ nke ngwa mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike inwe ntakịrị mmetụta - mana ịkọwapụta atụmatụ gị nwere ike iwepụta ike ya.
Mee elu mee ala, ihe ị na-achọ ime bụ nwee ike nke mgbasa ozi mmadụ site na ịmepụta ihe omume ma ọ bụ akwa mmiri n'etiti azụmahịa gị na onye na-ajụ gị. Ozugbo i mechara rụọ akwa ahụ, lezienụ anya!
Valleymụaka Ndagwurugwu, Cheta ChaCha?
Dec 6, 2009 na 2:47 PM
M ga-elele ikwughachi. Daalụ maka ntụnye ahụ.
Dee 7, 2009 na 10: 05 AM
Daalụ maka nnukwu ihe ncheta ọzọ na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ọrụ. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta dị ka gimmick iji nwetakwuo okporo ụzọ ma ọ bụ SEO ngwa ngwa… ọ na-ewe ọrụ yana ikike ịge ntị ma mụta ihe n'aka ndị gị na ha na-emekọrịta ihe.
Dec 8, 2009 na 3:48 PM
Daalụ Steve! Ekwenyere m na gị 100%… ndị na-erigbu teknụzụ anaghị ahụ ụgwọ ọrụ zuru ezu.